Ny bisikileta cyclocross tsara ho an'ny mitaingina lalana? - Cyclocross
Tena > Cyclocross > Cyclocross remount - ahoana no hanapahanao hevitra
Cyclocross remount - ahoana no hanapahanao hevitra
Ny bisikileta cyclocross tsara ho an'ny mitaingina lalana?
Na eo aza ny fahamatorana rehetra, dia azo ekena tanteraka izanymitainginanybisikileta cyclocrossmananabisikiletaary mampiasa kodiarana kely fotsiny miaraka amin'ny tery kokoalalanakodiarana. Milamina ihany koa raha ny marinamitainginaamin'nylalanamiaraka amin'ny midadasika kokoacyclocrosskodiarana sy kodiarana efa anananao.
Vao tsy ela akory izay izahay no nanao lahatsoratra iray mampitaha ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta amin'ny bisikileta sy ny bisikileta cyclocross. Nandritra ny fotoana nanoratanay ny script dia nahatsikaritra izahay fa miaraka amin'ny taranaka vaovao antsoina hoe fiaretana amin'ny bisikileta fiaretana, ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia kely dia kely kokoa. Nanontany ny tenanay izahay, ary ny sasany aminareo dia nanontany tena ihany koa ao amin'ny faritra misy ny hevitra, raha afaka mitaingina bisikileta amin'ny bisikilety ianao na tsia.
kilasy fihodinana eo akaikiko
Ka nieritreritra izahay fa hanandrana. Ity dia bisikileta an-dalambe Canyon Endurace misy kodiarana cyclocross. Nanontany an'i Canyon aho izao, izay nampindrana ahy tamin'ity bisikileta ity raha afaka mitaingina cyclocross na tsia.
Nilaza izy ireo fa rehefa noforonina ity bisikileta ity dia tsy nieritreritra cyclocross farafaharatsiny. Tsy izany no nanamboarana azy. Saingy nilaza koa izy ireo fa bisikileta tsara mandroso io.
Ka toa fihantsiana izany. ”“ Cyclocross ity valan-javaboary an-tanàn-dehibe ity. Mihazakazaka manodidina ny faritra ahitra sy tany tsy tiana, misokatra sy azon'ny rehetra idirana.
Raha ny marina, herinandro vitsivitsy lasa izay dia tena nisy hazakazaka tamin'ity toerana tena tany ity. Inona no toerana tsara kokoa hametrahana ny hazakazanao Enduro amin'ny alàlan'ny diany fa tsy ny am-pofoanao na amin'ny roa amin'ny làlana cyclocross tena izy? Manana fiakarana mideza tokoa isika, bozaka feno fotaka sy mikitoantoana ary fivadika malama roa. Ny zavatra voalohany azonao antoka fa voamarikao rehefa mihazakazaka eny ivelan'ny arabe amin'ny bisikiletanao ianao dia ny pedal.
Eny, eny, afaka mitaingina bisikileta an-tendrombohitra roa-tongotra ianao ary mampiasa kiraro bisikileta an-tendrombohitra amin'ny bisikiletanao. Fa raha ny fahitako azy dia mahatsiaro ho mihatsara kokoa ny pedal arabe. Izy ireo no tokony ho eo amin'ny bisikiletanao.
Fa rehefa manandrana misambotra any amin'ny tany tsy mitovy ianao dia mihasarotra hatrany. Raha ny marina dia mahatonga antsika rehetra i Matt Stephens. Isao aho.
Vetivety foana isika dia eo amin'ny vato misakana voalohany, io dia ilay fiakarana kely maloto sy mizotra mitaingina mahitsy amin'ny bisikileta miaraka amina rojo 42 sy cassette 28. Fa hafahafa ihany, mety hisy hieritreritra fa amin'ity bisikileta ity, izay haingana be kokoa, ny fitaovana ambany dia tena ambany kokoa. Ka tsy olana ny hantsana.
Inona anefa, ny maha-malefaka azy ary koa mangatsiaka. Aza manahy. Eo aho, eo aho. ”“ Miditra aho, miditra aho.
Avy eo koa ny fanamorana. Eny, araka ny nolazaiko, ireo kodiarana ireo dia tery ihany ho an'ny cyclocross amin'izao fotoana izao. Ny fetra ara-dalàna UCI dia 33, saingy misafidy kodiarana 35c aho amin'ny familiana ankapobeny, ary betsaka ny olona mitaingina lavitra kokoa.
Ny anton'izany dia ny fanananao hery bebe kokoa ary koa fampiononana bebe kokoa noho ny ahafahanao mamela azy ireo hihazakazaka malefaka kely nefa tsy ahiana ho potika. Nefa amin'ireto dia avelao izy ireo hihazakazaka mafy kokoa satria somary tery kokoa izy ireo. Ka manana 50psi aho.
Ary toy izany koa amin'ity bisikileta ity, na dia natao niaraka tamin'ny fanarahana fanarahana virtoaly aza izy mba ho malama sy malefaka amin'ny arabe, eto, amin'ny ahitra goavambe misy kodiarana tery sy mafy, dia tena asa mafy izany. ♪ ♪ Eny, noho izany dia manana zorony malama fotsiny isika ary akaiky ny fidinana kely. Tsy misy mampatahotra, fa hizaha toetra ny fikirakiran'ity bisikileta ity.
Koa satria somary mitetika ny bisikileta mihazakazaka noho ny bisikileta cyclocross, somary fohy kokoa ny ao aoriana. Na dia midika aza izany fa mihanika be eny an-dalana izy io, somary sarotra kokoa ny mifehy azy rehefa malama izy ary rehefa manomboka mikorisa ianao. Avy eo ny farany koa mahatonga azy ho mafy kokoa.
Ny kodiarana eo aloha dia arotsaka ambany dia ambany mba hahafahanao mikapoka ny kodiarana amin'ny tongotrao aloha rehefa mihodina miadana. Fa na dia manomboka mihetsiketsika aza ianao dia somary mitebiteby kokoa. Ary rehefa somary sarotra ny raharaha, dia satria ny zoro familiana amin'ny bisikileta mihazakazaka dia sahabo ho iray degre kokoa noho ny amin'ny bisikileta cyclocross.
Ka ity bisikileta ity dia mahatsapa tena toy ny bisikileta taloha, izay tena mahafinaritra tokoa. Ary azo antoka fa tsy ratsy amin'ny géometrière-n'ny lalana koa, satria manana fononteny ambany izy io. Raha ny voalaza, rehefa mihodina ny bisikileta rehefa mihazona mafy ianao dia mahatsapa ho azo antoka kokoa ilay bisikileta ary mora kokoa koa ny manova lalana.
Eny ary, makà lap. Ahoana no hikarohantsika? Tsara izany raha ny fahitako azy. Rariny raha hiteny aho. Ny fizarana dia tsy ny olana noeritreretiko fa tsy androany.
Heveriko fa tsy mila fotaka be intsony ny fijanonana haingana. Saingy tena tsara aho izao ary. Ary eo amin'ny geometri izahay ary izany no iray amin'ireo fanontaniana lehibe nananako.
Ary raha ny marina dia tena tsy mandeha an-dalana mihitsy ity bisikileta ity. Tsy dia mitebiteby loatra izany, na dia ho hitanao haingana aza ny fetra raha manosika anao mafy eny an-dalana ianao. Raha ny tena izy dia miharihary haingana kokoa ireo fetra ireo rehefa miadana amin'ny tany tena ara-teknika ianao.
Ary avy eo misy ny zava-misy fa tsy afaka nankany amin'ny toerana akaikin'io rojo vy lehibe io aho satria gadra vy 52 sy 52, midika izany fa tena mandeha haingana ianao ary tsy dia nalaky haingana aho. Tsara, ny fahasamihafana lehibe indrindra eo anelanelan'ny sy bisikileta miampita amin'ny hevitro ny sakan'ny kodiarana. Ireo kodiarana ireo dia tery loatra noho ny tsiriko. Ny zavatra midadasika kokoa dia hamoaka potika bebe kokoa ary koa hahafinaritra kokoa amin'ny fiara tsy mataho-dàlana.
Saingy misy zavatra iray izay mbola tsy nokasihintsika androany ary izany dia ny tanjaka. Moa ve ny bisikileta an-dàlambe matanjaka ka entina eny ivelan'ny arabe, na amin'ny tsorina, hovakivakinao ve? Eny, izany no fanontaniana apetratsika amin'ny roa amin'ireo mpanamboatra hitanao eto. Voalohany, Reynolds izay manao ireto bisikileta tsara tarehy be eto ireto.
Ary nilaza izy ireo fa ireo kodiarana ireo dia mety indrindra amin'ny bisikilety na vatokely, na dia maivana aza izy ireo. Ary nilaza ihany koa izy ireo fa nihoatra ny 100% ny fepetra takian'ny tanjaky ny làlana farany ambany indrindra an'ny UCI. Ka matanjaka indroa araka izay ilainy izy ireo.
Avy eo izahay dia nanontany an'i Canyon hoe iza no namela anay hampiasa ny bisikiletany tsara eny an-dalana, ary nasongadin'izy ireo indray fa tsy natao ho an'ny cyclocross. Fa raha ny tanjaka dia matanjaka toy ny bisikileta lakroa izy io. Fa ahoana ny amin'ny fanontaniantsika tany am-boalohany, amin'ny farany? Afaka mitaingina bisikileta amin'ny hazakazaka ve ianao? Heveriko fa toa eny ny valiny, azonao atao izany.
Ny sisa ataonao dia tsindrio ny theglobe na aiza na aiza misy azy. Ary avy eo votoaty bebe kokoa amin'izao fotoana izao.
Ahoana ary raha ianao no mijery ilay lahatsoratra niresahanay tamin'ny voalohany mba hampitahana ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta amin'ny bisikileta sy bisikileta cyclocross. Raha te-hahatongavana amin'izany ianao dia ny tsindry etsy ihany no tokony hataonao. Na mba hahazoana teknolojia tsy an-dalambe, mianatra avy amin'ny Sven Nys, tompom-pahefana tsy voadinika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manana ny sasany amin'ireo toro-hevitra amin'ny cyclocross tsara indrindra izy.
Misy fampiatoana ve ny bisikileta cyclocross?
Ny freins abisikileta cyclocrossfreina cantilever matetika, izay tsy dia fahita eny an-dalana na eny an-tendrombohitrabisikileta. Ary koa, hiampitabisikiletamatetikaeFAfantsom-bozaka ambony fisaka na famolavolana hafa kabisikileta afakahoentina ambonin'ny soroka ho an'ny hazakazaka hazo fijaliana.Fampiatoanadia azo jerena amin'ny fork ary ho an'ny aoriana any an-tendrombohitrabisikileta.
Fony vao namoaka ity bisikileta gravel mihantona feno ity ny marika bisikileta tsy lavitra an'i Niner, dia gaga ny ankamaroan'ny tany. Fa eto isika roa taona aty aoriana ary vonona ny hamotsotra ny Niner MCR. Bisikileta gravel tanteraka mihantona feno misy fiatoana 50mm any aoriana ary fampiatoana 40mm eo aloha, vonona ve izany ny tontolo? Nanasa anay i Niner mba hampiseho aminao ny teknolojia ary ho hitanao ny mampitaha azy ireo amin'ny lalana vaovao sy bisikileta RLT nentim-paharazana kokoa. (snap rantsan-tànana) Raha te hahalala, dia hifampifanandrina amin'izy ireo isika amin'ny fizotran'ny fotoam-pitsarana epic gravel. (mozika mahery) Saingy ny zava-dehibe, hazavaiko ihany koa ny fomba fiasan'ny fampiatoana bisikileta.
Satria miahiahy aho fa betsaka amintsika no tsy mbola nanana antony hahalalana raha tsy hoe bisikileta an-tendrombohitra ianao, amin'izay dia manomboka ny lohanao. Mety efa nandre momba ny rafitra lohataona 4 bar ianao miaraka amin'ny halavan'ny duel fohy. Na dia, milaza ny marina amin'ny tenanao aza ianao dia mety tsy fantatrao hoe manao ahoana izany. (Bipy fiarakodia) (peratra fanalahidy) Eny, tsy haiko raha rehefa nangataka anay i Niner mba hanoratra ny bisikiletany vaovao dia nanantena izy ireo fa hiseho eo am-baravarany any Fort Collins, Colorado, fa izany indrindra no nitranga.
Eto izahay. (mihomehy) Ya (mandondom-baravarana) (mozika orkestra manandratra) Alohan'ny handehanantsika ny làlambe, andao hanana zavatra iray mahitsy, ny sasany aminareo dia mety hijery ity bisikileta ity ary hieritreritra, mazava ho azy fa bisikilety an-tendrombohitra fotsiny izany, saingy tsia, tsy bisikilety an-tendrombohitra ity. Bisikileta an-tendrombohitra ity.
Eny ary eny, manana fitoviana izy ireo, samy afaka mametaka kodiarana mitaingina malalaka izy ireo, na dia voafetra ho 50 milimetatra aza ny MCR satria mety ho lehibe kokoa izy io, ary samy manana ny fampiatoana azy roa eo anelanelan'ny kodiarana aloha sy aoriana ary ny zana-kazo lehibe. . Mitovy ny sehatra fampiatoana azy ireo, saingy ny milaza fa ny bisikileta noho izany dia mitovy amin'ny milaza ny kamio biby goavam-be ary ny fiara fitateram-bahoaka dia mitovy raha tsy izany. Ity dia afaka manao an'io. (miala sasatra c mozika unty) Fa tsara izy amin'izany. (Mozika rock) Afaka ny MCR. (mozika miala sasatra amin'ny firenena) Fa izy no mahay indrindra. (mozika fitsaharan'ny distrika) Ary mety tsy vitany izany. (Mozika rock) Ka bisikileta graba ve ity? Ie, ary hanaporofoana an'ity, ity misy bisikileta gravel iray hafa navoakan'i Niner.
Ity ilay RLT, bisikileta vatokely tsy voahidy. Ny ampahany manan-danja indrindra mamaritra ny bisikileta dia ny toerana sy ny geometry azy. Ary amin'ity tranga ity dia samy mizara ADN iray ihany izy ireo izay nivoatra avy tamin'ny bisikilety.
Ianao koa dia manana tadin-tànana mitete, manana shifter amin'ny tohotra izy ireo, ny toerana dia mamela anao ho lava sy ambany mba hahafahanao mitaingina anao haingana sy milamina mandritra ny fotoana maharitra. Ary ny géometry, ny geometry manandanja rehetra, dia mitovy ihany koa, noho izany dia mahatsapa izy ireo fa mitovy, velona izy ireo, mailaka izy ireo ary mamaly. Ka noho io lojika mahavariana io, tsy lazaina intsony ny fisamborana mahatalanjona, manantena isika fa eo amin'ny pejy iray ihany isika rehetra ary vonona hamaly izany fanontaniana izany.
Ahoana raha misy? ny bisikileta tsara toa an'io ary ny mifamadika amin'izany? Mba hitsapana azy ireo, andao haka tsipìka kely izay natolotr'i Niner ho antsika. Manana làlana ary manana vatokely be izy. Fiakarana, fidinana, fisaka tsara ary singletrack kely somary manina toy ny encore. (mozika techno upbeate) Eny, toy ny tamin'ny taona 90 tany ho any izany, raha mpanao bisikileta an-tendrombohitra maro no resy lahatra amin'ny tombony azo amin'ny fampiatoana tanteraka.
Tsy mila an'io aho fa salama tsara toa ahy! Sarotra ny mandà, sarotra kokoa, tsy azonao lavina koa izany. Ity bisikileta ity dia manodidina ny iray kilao sy sasany kilao noho ny RLT tena manify. Ary azo inoana fa hampihena anao eo amin'ny roa segondra isaky ny kilometatra amin'ny fiakarana toa an'io.
Midika izany fa io dia mety tsy hoentina any Tour de France, fa tsy misy ifandraisany firy amin'ny olona toa anao na izaho io. Avy eo koa ny zava-misy raha mampahafantatra ny tenanao toa an'i Marco Pantani ianao ary te-hiakatra amin'ny lasely, dia hafa kely ny fahatsapana ilay bisikileta, ary izany dia satria mihetsika ny fampiatoana, na mamaly ny hery avy amin'ny gorodona, ka bumper avy any ambony ka hatrany ambany, ka ny lanjan'ny vatanao. Mba hivoahana amin'izany zava-misy izany, ireo mpanamboatra bisikileta an-tendrombohitra dia mampiasa fotoana sy ezaka be dia be amin'ny fanadiovana ny sehatra fampiatoana azy ireo, ary nahatsapa i Niner fa tena notapahin'izy ireo tamin'ny taona 2008 taorian'ny nanomezany patanty ilay mpamorona CVA azy ireo, Constantly Varying Arc, ary tena marani-tsaina izy io ny fampiatoana kely amin'ny fihenjanana rehefa manodinkodina mba hampihenana ny tsy fitoviana dia mandresy io fihenjanana io, na anti-squat, hanome azy ny tena anarany, avy eo mihetsika ara-dalàna ny fampiatoana.
Na izany aza, mba hampihenana ny fanehoan-kevitra amin'ireo pedal, ity arc tsy miovaova ity dia midika fa ny toerana mihodinkodina na ny toerana mihodinkodina virtoaly dia niova toe-javatra, mitazona ny fampiatoana hatrany izy nefa tsy mahatsiaro tena ho mitaingina spaonjy. Na izany aza, rehefa manao tarmac toy izany ianao dia azonao atao ny mamadika ny hidiny - izany rehetra izany dia mahatonga ny fampiatoana tsy hiasa, midika izany fa mandeha bisikileta henjana ianao. Ary andao ho marin-toetra, ny aspalta dia fitaovana iray fotsiny ahazoana ny vatokely.
Ny antony mety tadiavinao fampiatoana amin'ny bisikileta dia betsaka, fa amin'ity tranga ity dia heveriko fa misy telo izay tena miavaka. Voalohany, fampiononana sy mazava, manana 50 milimetatra misy rivotra milomano, mihantona eo anelanelan'ny volanao sy ny lalan-kaleha, dia hanalavitra azy ireo amin'ny vongan-tany. Ankehitriny 50 alina alina dia tsy dia toa izany loatra, fa hoy kosa i Niner fa ity damper ity dia natokana manokana ho an'ny fitondrana vatokely.
Heveriko fa manana lozam-pifamoivoizana an-kolaka kokoa io. - Miaraka amin'ny MCR, dia namboarinay tsara ny fanananay fampiatoana CVA hihaona amin'ny fitakiana fitaterana vatokely izay eritreretinay ireo mpitaingina mipetraka eo amin'ny lasely, mametaka ary mihaona amina fantsona kely. Izay holazainay, amplitude ambany, fa karazam-boninkazo matetika.
Ny fampiatoana dia hitazonana ny mpitaingina eo afovoan'ny fikorotanana, saingy tena mamaly izy, milamina ihany koa, tampoka matetika - ary io irery io no mahomby kokoa, fa raha ampifandrainao amin'ny antony fahatelo kosa ity vao mainka aza izany. Ary izany no mampihena ny hovitrovitra rehefa manana fampiatoana ianao. Mety ho fantatrao ny resaka momba ny fampihenana ny hovitrovitra rehefa miresaka momba ny antony mahatonga ny tsindry kodiarana ambany eny an-dàlana hahomby kokoa.
Ary izany koa dia mihatra amin'ity tranga ity. Ny fihontsoran'ny bisikileta sy ny vatana dia tena mampiadana anao ary rehefa mampihena azy ianao dia mandeha haingana be ary mihetsika tsara kokoa. Ny antony voalohany dia ny fahazoanao misimisy kokoa satria ny kodiaranao dia nifandray tamin'ny tany intsony.
Ho tsikaritrao izany indrindra rehefa miakatra ianao, nefa koa rehefa mihodina na mametona. Raha mbola misy fiantraikany amin'ny safidinao kodiarana io. Afaka mitaingina kodiarana malefaka kokoa sy haingana kokoa ianao ary mbola manana ny habe mitovy aminy, raha tsy mihoatra ny fihazonana, fa mandray soa ianao amin'ny fihenan'ny halaviran-dàlana.
Tsy azoko antoka fa hisy hanontany ny antony itiavanao izany rehefa lasa izy. Woohoo! O r! Tao anatin'ny fotoana fohy dia zavatra iray ny mitaingina vatokely, na farafaharatsiny zavatra iray manana anarana, niova be izy io, manomboka amin'ny arabe gravel amin'ny bisikileta sy ny bisikileta cyclocross ka hatramin'ny fandatsahana bisikileta saika amin'ny làlan'ny bisikileta Mountain, maninona no ampidirintsika ao anaty loopantsika . Fizarana fohy, tena mahafinaritra, miampy paompy iray indray mandeha. (mozika basika miadana) Eny ary, avy eo mihazakazaka laharana voalohany amin'ny mahazatra indrindra amin'ireo moto roa.
Mazava ho azy fa tsy manana fampiatoana ity iray ity, fa ny RLT RDO, izay maodely hazakazaka Day Optimize vita amin'ny fibre karbonika. Niner dia iray amin'ireo marika voalohany nandeha tany amin'ny fety vatokely, noho izany dia nanam-potoana betsaka izy ireo mba hahatsapan'izy ireo ny bisikiletany araka ny itiavany azy, ary amin'ny gravel spectrum dia vao mainka mampientanentana satria afaka mifanaraka amin'ny kodiarana lehibe ianao, ny ny fahazoana kodiarana ho an'ny 50 milimetatra dia lehibe kokoa aza raha ahenao ny savaivony kely 650b. Izy io dia manana toerana somary mitsangana sy fohy kokoa noho izay ho hitanao amin'ny bisikilety eny an-dalambe, fa ny mifanohitra amin'izay kosa dia lava kokoa ny elakelan'ny kodiarana, ho fitoniana bebe kokoa Ka na dia henjana be aza izy io dia tokony ho faly mahita volo.
Na manantena eto ihany. Mipepepepepepepepepepepepepipepepipepo (Potika amin'ny vatokely ny kodiarana) (mozika rock mahery) (miaina mafy) Eo amin'ny toerana faharoa isika amin'ny MCR na Magic Carpet Ride.
Andao handeha (pne crunch amin'ny vatokely) (mozika amponga mahery) (mozika milamina) Aorian'ny fandroana tena ilaina sy labiera tena ilaina dia azonao atao izao ny mandresy lahatra anao amin'ny valiny vitsivitsy. Ny laharana voalohany amin'ny epic Head-to-Headgravel Timetrail Showdown miaraka amin'ny fotoana 11 minitra sy sivy segondra dia ny RLT. Telo segondra niverina ny MCR fampiatoana feno dia ny valiny ary ho hitanao fa ny MCR dia haingana kokoa teo amin'ny fizarana mihodinkodina sy manjavozavo.
Izay haingana kokoa ny RLT amin'ny fizarana malama kokoa sy haingana kokoa. Angamba tsy mahagaga raha mieritreritra aho satria samy bisikileta grama, dia miavaka amin'ny faritra samihafa amin'ny taranja rehefa v. Na izany aza, misy bisikileta samy hafa.
Ny RLT dia manana ambaratonga tsotra, eny, ny bearings ao amin'ny MCR mihantona feno dia Enduro Max Black Oxydide bearings dia mitaky fikolokoloana maharitra, toy izany koa ireo mpitroka hatairana. Zavatra bisikileta an-tendrombohitra no tena mahazo aina amin'izao fotoana izao, fa ny mpandeha an-dalambe sy ny mpitaingin-tsoavaly dia vahiny amin'izao fotoana izao. Ary raha manao dia lavitra ianao, dia ny fanatsorana angamba no ankihiby.
Ary noho io antony io ihany koa dia mety noravahan'i Niner ny RLT tamin'ny isa tsy latsaky ny 26. Azonao atao ny mahita azy ireo eto, eto, eto, eto, eto. Fantatrao angamba ireo.
Eto, eto, eto, eto, eto, eto, eto ary eto. Ho fiarovana azo antoka indrindra dia azonao atao ny misafidy ny safidy amin'ny vy vy fa tsy ny aliminioma mora vidy na ny safidin'ny karbaona maivana indrindra. Satria na dia mahafinaritra aza ny haingana dia tsy voatery ho haingana ny fitsangatsanganana.
Avy eo aiza ny MCR? Mety manontany tena ianao raha bisikileta an-tendrombohitra 29er no tena ho tsara kokoa noho izy mivelona amin'ny zavatra curvy sy mikitoantoana; surlya 29er dia ho tsara kokoa ary mbola bisikileta an-tendrombohitra no azo antoka fa haingana kokoa amin'ny lalan'ny bisikileta an-tendrombohitra, nefa mieritreritra ihany koa aho fa mety tsy tsara izany rehefa mora kokoa ny lalana. Ny tena zava-dehibe amiko dia ny toerana raisinao amin'ny bisikileta - ny bisikileta an-tendrombohitra dia mety hahatsapa ho lehibe tokoa, izy ireo amin'ny ankapobeny dia mahitsy sy lava be, ary raha manapa-kevitra ny handany iray andro amin'ny bisikileta aho dia tena hanana ny toerana nisy ahy akaikin'ny toerana misy ahy eny an-dalambe, heveriko fa somary mahazo aina kokoa amin'ny ankapobeny izany. Ary somary mahomby kokoa amin'ity faran'ny spectrum ity.
Na izany na tsy izany, tena dodona ny handre ny eritreritrao momba an'io raharaha io aho. Vonona ve ianao amin'ny dingana manaraka amin'ny bisikileta vatokely? teknolojia? Sa zavatra nentin-drazana ianao? Hamarino tsara fa tafiditra ao amin'ilay fizarana hevitra etsy ambany ianao. Azoko antoka fa tsy handiso fanantenana anao ianao.
Mba omeo ankihibe koa ity lahatsoratra ity. Ary raha mahita iray hafa maniry lahatsoratra Kies ianao, maninona raha jerena eo amin'ny efijery eo noho eo.
Haingam-pandeha lavitra noho ny bisikileta ve ny bisikileta?
Tsy dia miadana kokoa izy ionoho nynybisikiletalavitra, ary mahazo aina sy be mpampiasa kokoa izy io.
Mandeha haingana ve ny bisikileta cyclocross?
Hafa ny mitaingina môtô amin'ny bisikileta, ary eny, afaka mihazakazaka hafainganam-pandeha matotra tsy azo tanterahina irery ianao. Ary eny, ny CX gearing dia tsy ho afaka mitazona 30+ ao anaty vondrona. (Na 50x11 aza, fitaovana mahazatra mahazatra indrindra eo amboninybisikileta, tsy ampy, amin'ny 35mph.)2. 3. 2015.
Inona no maha samy hafa ny bisikilety sy bisikileta amin'ny arabe?
Bisikileta Cyclocrossdia ampiarahina amin'ny paingotra ambany, mba hahamora ny fivezivezena amin'ny faritra tsy mitovy.Bisikiletymanana fitaovana avo kokoa, hanomezana ireo hafainganana ilainaeny an-dalanahazakazaka. Ankoatr'izay, ny elanelam-bokatra tery dia miantoka fiovana haingana.Bisikileta Cyclocrossmampiasa kodiarana midadasika kokoa,ao amin'nyisan-karazany 30-40 mm miaraka amina voadidy knobbly.
Fa maninona ny bisikileta vatokely no tsy misy fampiatoana?
Toy ny lalana izy ireobisikileta, fa heverina ho tantanana toy ny tendrombohitrabisikiletaeny an-dalana, ka maninona no tsybisikileta vatokely manana fampiatoana? Ny antony lehibe indrindra dia satriafampiatoanaafaka mangalatra ny hafainganam-pandeha, mandratra ny zava-bitan'izy ireo eny an-dalana, ary mazava ho azy fa manome lanja.05.03.2021
Mendrika ve ny bisikileta cyclocross?
Cyclocrossmanatsara ny fahaizanao ny mitaingina
Mitaingina abisikileta cyclocrosshahatonga anao ho mpitaingina tsara kokoa, indrindra rehefa miala amin'ny lampivato ianao. Satria tsy dia voafehin'ny kodiarana ny hoditra ary tsy mihodina amin'ny faka sy vato toy ny kodiarana MTB, dia mila miasa mafy ianao mba hitazomana ny fifehezana nybisikileta.
Tsara ve ny bisikileta cyclocross rehefa mandeha?
Bisikileta Cyclocrossdiatsara amin'ny fivezivezenasatria mahatonga azy ireo ho azo antoka, haingana sy mahafinaritra ny mitaingina. Ny geometry zareo dia mahazo aina kokoa noho ny an'ny arabebisikiletaary manohitra tsy mihodina kokoa noho ny tendrombohitra no anoloranybisikileta.
Mahatonga mpandeha tsara ve ny bisikileta cyclocross?
Bisikileta CyclocrossdiatsaraHO AN'NYcommutingsatria izy ireomanaomitaingina azo antoka, haingana ary mahafinaritra. Ny geometry zareo dia mahazo aina kokoa noho ny an'ny arabebisikiletaary manohitra tsy mihodina kokoa noho ny tendrombohitra no anoloranybisikileta.
Ny bisikileta cyclocross haingam-pandeha toy ny bisikilety ihany?
Cyclocrossmety ho ny nahafaly anao indrindra tamin'ny kodiarana roa
Raha ampitahaina amin'ny tendrombohitrabisikiletany 'crosser dia tsy mahay manokana ary ny anaobisikiletadia ho beHaingankaingana, mahomby kokoa ary mety kely ihany koa ny lanjany. Fa izany dia ampahany amin'ny mahatonga ireto bara milatsaka ambany iretobisikiletamahafinaritra be.